ခါးအနိမ့်အိတ်ကပ်ပါ Push Up Micro ဘရာဇီး Bikini အစုံ - အခမဲ့ရေယာဉ်နှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
အနိမျ့ခါးလောက်ရာတေးသံ Push ကို Up ကိုမိုက်ခရိုဘရာဇီးရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ်မှတ်မည်
$19.08 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $31.28
အရောင် B1250CP B1250GR B1250LB B1250OR B1250PI B1250PU B1250RE B1250RR B1250WR B1250YE
L / B1250CP M / B1250CP S / B1250CP L / B1250GR M / B1250GR S / B1250GR L / B1250LB M / B1250LB S / B1250LB L / B1250OR M / B1250OR S / B1250OR L / B1250PI M / B1250PI S / B1250PI L / B1250PU M / B1250PU S / B1250PU L / B1250RE M / B1250RE S / B1250RE L / B1250RR M / B1250RR S / B1250RR L / B1250WR M / B1250WR S / B1250WR L / B1250YE M / B1250YE S / B1250YE
ခါးအနိမ့် Padded Micro Brazilian Bikini Set - L / B1250CP backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမျိုးအစား: ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ်မှတ်မည်
Pad နှင့်အတူ: Yes
ပစ္စည်း: 82% Ployester + 18% Spandex
ရေချိုးဝတ်စုံသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနီရောင်အဆင်းဖြစ်သည် အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုသာထိပ်ဆုံးမှာကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးများနေရာတွင်ကောင်းကောင်းမထားနိုင်ပါ။
Хорошеекачествоибыстраядоставка, советуюпродавца !!!
Totalmente satisfeita ။ Agora quero အွမ်က de cada ကော
Perfeito !! Excelente qualidade! Virei client da marca !!